Abaalmarinta Macaamiisha 3D 2009 - Geofumadas
Juunyo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Engineering
AutoDesk waxay ballaarinaysaa martiqaad muujinaysa sifooyinka cusub ee Mashruuca 3D wuxuu keenayaa nooca 2009, labadaba xalalka qorshaynta magaalada, dhismaha iyo shaqada madaniga.
Bandhigani wuxuu noqon doonaa online, waana bilaash hal saac ah ... iyo ugu fiican dhammaantood, Isbanishka !!!
Tani waxay tahay inaad dooratid bogga internetka ee kiiskan:
News AutoCAD 3D 2009:
Dhulgooyooyinka, dhul-guluubyada iyo jaantusyada bulshada
Mawduuca waxaa ka mid ah:
• Daaweynta iyo fududeynta goobaha waaweyn.
• Biyaha dusha sare leh
• Nadiifinta sharaxaadda sharaxaadda
• Gaadiidka iyo dib udajinta alaabta
• Meelaha la soo dejiyo iyo duufaanta amaahda
Shirka web wuxuu noqon doonaa Thursday June 26 2008, xaq duhurkii (12h in 13h), ayaynu ku garanaynaa in marka Spain iyo aad ma aan tegi karo shimbirta codsan kartaa in aad saacado yar ka hor diri yar fariin.
Haddii aad shaki qabto, waxaad la xiriiri kartaa Xarunta Wicitaanka (902 12 10 38) ee AutoDesk gudaha Spain
Post Previous«Previous Tababarka Cadastre ee Peru
Post Next Maanta waa Maalinta DownloadNext »
3 Jawaab: "Maxaa Cusub ee Cusub ee Xanaanada 3D 2009"
SIDEE AYAAD KU HELI KARAA BARNAAMIJKA?
Laakiin waxaan ka baqayaa in aanad isticmaali doonin inta badan, haddii, sida aan aaminsanahay, waxaad ku nooshahay xeebta galbeed ee Atlantic, waxaad ka tegi doontaa moobe telefoonka.
Kalfadhiyadan, sida websaydh Maraykan ah, waxaa kaliya oo la heli karaa iyada oo loo marayo wicitaan teleefon ah ... A REAL INCONVENIENT real
Waxaan si joogta ah uga dhex muuqan jirey webkani, laakiin hadda waxaan soo dejin karaa kalfadhiyada ka dib kuwaas oo aan ku raaxaysaneyno posteriori 🙄
Julian Garzón B isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan aad u xiiseynayaa tababarka ON LINE ee ay siinayaan CIVIL 3D.
Waad ku mahadsantahay bixinta adeeggan